Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inongowanzikanwa se Lucas. Nhoroondo yedu Lucas Hernandez Childhood pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva kuti akaita basa rinokosha muChitambo FIFA World Cup kuFrance. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveBias Hernandez's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Kutanga, mazita ake akazara ndiLucas François Bernard Hernández. Lucas akaberekwa musi weChishanu Valentine 14th February 1996 muMarseille, France. Akazvarwa kuna amai vake; Py Laurence uye baba, Jean-François Hernández (vose vabereki vanoratidzwa pasi apa).
Lucas anobva mumhuri yebhola yebhola uye akakurira nemukoma wake muduku Theo Hernandez (akafananidzirwa pasi apa naLucas) uyo makore maviri ari wechidiki uye iye zvino ari kutamba chiSpanish, Real Madrid.
Lucas pamwe chete nemukoma wake vakatanga mararamiro avo kuMarseille France nekuda kwekuti baba vavo vakatamba bhora rake paOlympic de Marseille. Sekuwana kuwana France nyika yakakodzera yekugara uye isingadi kutamira kune dzimwe nyika, vose vakomana vakaramba vari mumadzimai avo munyika iyo baba vavo vakasiya kuSpain sezvo akaendeswa kuSclub club, Compostela.
Apo Lucas akanga ane makore 4, iye pamwe naTheo uye amai vavo vakatamira kuSpain kuti vabatane nababa vavo avo panguva iyoyo vakanga vachitamba nemakore ekupedzisira eAcletico Madrid.
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuparadzaniswa
Kugara muSpain kwaiva kwakaoma kuna Lucas sezvaakazviwana akaora mwoyo mupfungwa nekuda kwemubereki wake ane dambudziko remhuri. Dambudziko mumhuri yeHernandez rakauya nekuda kwechikonzero chekufamba mumhuri.
Zvinotyisa, rimwe zuva, baba vangu Lucas Hernandez, Jef, sezvaaizivikanwa neshamwari dzake, akatakura zvikwama zvake ndokutora kuzotanga hupenyu hutsva pane imwe nzvimbo, zviuru zvemakiromita kubva kuMadrid. Nekunetseka, akasiya zvinhu zvose shure, kusanganisira vanakomana vake.
Kucherechedza vabereki vake kuparadzana kwaiva zvechokwadi nguva yakaoma kuna Lucas. Zvakanaka, chero mwana upi zvake akararama kuburikidza nekuputsa kwevabereki achaziva chete zvakanyanya kurwadziwa kwepfungwa kunogona kukonzera. Kuna Lucas naToo, kuparadzana kwevabereki kwaiva nehutano hwekutengesa hwepfungwa pavari, chiitiko chakakonzera ivo kumunhu mukuru.
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Amai Amai
Py Laurence mumwechete aifanira kuunza vose Lucas nemukoma wake, Theo up oga. Achikura pamwe naamai vake, Lucas nemukoma wake vose vakawana mubholabhoza nzira yekubuda mumamiriro ezvinhu akaoma. Kusununguka kwakaguma apo paiva nebhora pamakumbo avo zvichiita kuti vaite (Lucas naTheo) kuwana mumvuri uye nyaradzo kubva kure chaicho chinotambudza chekuparadzaniswa kwevabereki.
Kushayikwa kwababa vakomana vekukwikwidza hakuna kuvadzivisa kuti vasave vatambi vemaoko. Theo, muduku wevaviri, ndiye wokutanga kutora pfungwa dzeAtletico de Madrid vakatsvaga uye akakumbira kuenda kune rimwe dambudziko raakapfuura nemirairo inobhururuka. Lucas (nyaya yenyaya ino) akawanawo mukana wekutsvaga mubhokisi panguva ye 11 (yakaratidzwa pasi apa).
Lucas akatanga chikwata chake chechikoro neRayo Majadahonda, timu yebhola reSpain raive muMadadahonda, munharaunda inotonga yeMadrid. Mhedziso yake yekutamba neboka yakashungurudza amai vake vakatsigira kuti vanakomana vake vaviri vagare pamwe chete. Py Laurence akanga asingadi kubvumira imwe kuparadzana mumhuri, saka pakupedzisira, vaviri vevarume vakapedza kuenda kuAtlético Madrid. Kuona vose vakomana vake vachitamba Athletico Madrid vakaunza mufaro kumamu wavo uye neimba yaHernández.
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Zvinhu zvakatanga kutarisa zvakasimba sezvo hama idzi mbiri dzakapfuurira kuburikidza nehuwandu hwevechidiki uye pakupedzisira dzakaita kuti ive ndege huru. Apo Lucas akasvika kumutsara wokutanga, weAtletico Madrid, Theo mukoma wake akatora chikwereti paDeportivo Alavés. Yakanga iri paDeportivo Alavés lucky uye yakanaka Theo (inoratidzwa pasi apa) yakatsvaga na Real Madrid avo vakamutenga kumukirabhu mu2017.
Kutamba kwaTheo ku Real Madrid kwakaunza chero kunetseka kumudzimai wake nokuti akaona vana vake vachikura kuti vazvichengete ivo pachavo kunyange vari kure vanovaparadzanisa. Panguva ino, amai vasina mumwe vaizvikudza nevakomana vavo sezvavakatamba kumakwikwi makuru eMadrid.
Kunyange zvazvo mukoma wake muduku akaenda ku Real Madrid, Lucas akasarudza kushanda nesimba kuti amire nzvimbo yake neAtletico Madrid defense iyo yakafamba zvakanaka sezvaaifunga uye akadzingwa Filipe Luis. Kuva akanakidzwa nebhokisi pamakumbo ake, ane utsinye, uye anofadza mumhepo, Lucas akacherechedza mudzidzisi weFrench Didier Deschamps uyo asina kungoti Lucas kuFrench Senior team asi akaisanganisira muFrench 2018 World Cup. Vafambi vemakwikwi vakavhiringidzika kuona Lucas achigara akatanga kuFrance uye nhengo inokosha yekubudirira kwechikwata pamutambo we 2018 FIFA World Cup. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane mukadzi mukuru, kana kuti shoko racho rinoenda. Uye mushure mekunge zvese zveFrance muchengeti wepamberi, kune mudzimai anofadza kana musikana.
Senguva yekunyora iyi chidimbu, Lucas akaroorwa naAmerica Ossa Llorente uyo akarondedzera kusangana kwake kokutanga nemutambo mumashoko anotevera;
"Ndakasangana naLucas muMadrid uye chaive rudo pakutanga. Ndakadzidza mushure memwedzi miviri kuti akanga ari mutambi wechirwi uye ndaida kurega nokuti ndaifunga kuti mutambi wechirwi ane upenyu hwakabatikana uye ane vanoyemura vakawanda. Ini gare gare ndakatevera moyo wangu uye ndakaramba ndiine ukama ".
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Matambudziko
Vasati varoorana, Lucas naAmelia Ossa Llorente vakambobatanidzwa mune chimwe chiitiko chakaguma pamwe chete navo vose vari kubuda mudare.
Pana 3rd yaFebruary 2017 pane zve2: 30 am, Lucas akasungwa nemapurisa eSpain achishushikana nekurova musikana wake wekuti vose vakatsinhana uye vakakuvara mukupikisana. Amelia akazadza dare rinopikisa murume wake. Asati azviratidza mudare, Lucas naAmelia Ossa Llorente vose vaibatwa panzvimbo yacho nekuda kwekukuvadzwa kwakasimbiswa pavakarwa.
Mutongi akaisa chirongwa chekudzivirira pavari vaviri, pamwe nemakore 31 emunharaunda webasa. Yakanga iri chiitiko chakaipa icho chakafukidzirwa nepepanhau.
Chiitiko chacho chinotungamirirwa Diego Simeone's sangano remakurukota rakaisa mufananidzo wakaipa kune cub.
"Chaizvoizvo, handina hurumende ruzivo pamusoro pezvakaitika,"
Diego Simeone akadaro.
"Saka handigone kutaura pamusoro pechinhu chandisingazivi nezvazvo. Takaverenga zvinhu, uye takanzwa zvinhu, ruzivo rwusina hurumende rwakapararira. Ndiyo mamiriro ezvinhu atinenge tiri. Handigoni kutaura zvakare. "
Lucas Hernandez Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Zvimwe Zvinetso
Chisimba pamusoro pevakadzi ndicho chinetso chakakomba chinofanira kutorwa zvakanyanya muSpain. Kudzora urongwa hwakapiwa kuna Lucas Hernandez kwakauya nekunyeverwa kwekwakapedzisira kutongerwa mutongo weJNUMX gore kana kupesana kuripo. Zvakanaka, vose Lucas naAmelia Ossa vakarayirwa nedare reSpain kuti varambe vaine 1meters kubva kune imwe nguva mukati memakore emwedzi 500. Izvi zvakauya shure kwevaviri vakatongerwa mazuva 6 emunharaunda webasa.
Zvinoshamisika kuti, mapoka maviri aya akaputsa mutemo wekamberi sezvavakabatwa mune rudo rwakasiyana-siyana musangano.
Gare gare gore iroro munaJune, vaviri vacho vakasungwa pamwechete vachitarisa vose vaida kuMadrid ndege vachidzoka kubva muzororo. Iyi nguva yakaipoteredza, dare raifanira kuita chisarudzo. Hernandez akasungwa uye akapedza maawa mashoma mujeri.
Paakanga ari mutirongo, musikana wake haana kusungwa nekuti dare rake rainge risina kushandiswa.
Pasinei nekurambidzwa kupinda mukati 500 mamita mumwe wevamwe uye kunyange kutyora mutemo wedare, vaviri vacho vakasarudza kuenda kuSpain kunoroora muLas Vegas.
Maererano nemuchuchisi weMadrid, Lucas aigona kutarisana nemutongo wegore rimwe chete nekuda kwekutadza kutevera mutemo wekusiya kure nemusikana wake. Nenzira yakanaka kuna Lucas, akasunungurwa kubva pamhosva dzake sezvo chikamu chemuSpain mutemo chaimufadza. Maererano nemutemo weSpain, kana munhu akapomerwa asina mhosva yekutonga, mitozo yepasi pemakore maviri inowanzomirirwa. Lucas Hernandez akava munhu akasununguka uye akararama nguva dzose mushure mekufara nemudzimai wake mutsva. Vose vakaenda kuBahamas kuzopemberera nguva yavo yechando.
Lucas Hernandez Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Mukumutsvaga muFrench yenyika yeboka rinopindura zita racho "Lucas Hernandez" hazvirevi kune mumwe munhu anobva kuFrance. Nokudaro mubvunzo unozivikanwa ndewe; Nyika yeLucas Hernandez inobva kupi? Mhuri yaLucas Hernandez ndeyechiSpanish kubva kuna baba vake, Jean-François, aimbova nhabvu akatamba kuAtletico Madrid uye akasiya basa mu 2002.
Ukama Hwomukaka Matambudziko: Theo Hernandez ave anewo mugove wehukama hwehukama hunoita kuti mhuri yeHernández zvakare ive muziso rekudutu. Mune script yechiitiko chekupedzisira, Theo (akafananidzirwa pasi apa) akatopomerwa nekurova zvepabonde musikana wake muMarbella, Spain.
Izvi zvakaitika mwedzi mishomanana mushure mekunge mukoma wake mukuru, Lucas, akabatanidzwa mune chimwe chiitiko neaimbova musikana nemukadzi wake.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga Lucas Hernandez Childhood Indaba Yacho Plus Untold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Alexandre Lacazette Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Florian Thauvin Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts